Iimvavanyo ezininzi zokukhetha ziyenye yeendlela ezikhethiweyo zovavanyo ezisetyenzisiwe ngabafundisi beklasi . Kulula ukuba ootitshala bakheke baze bafumane amanqaku. Ukufunda iimviwo ezininzi zokukhetha ziyingxenye eyodwa yokulawula umxholo kunye nenye inxalenye yokuhlola ukuqonda. Ezi zilandelayo izicwangciso zovavanyo ezikhethiweyo zezifundo ziza kunceda abafundi baphucule amanqaku abo kwiimvavanyo ezininzi zokukhetha. Ezi zicwangciso zenzelwe ukwandisa amathuba okuphendula umfundi ngokuchanekileyo.
Ukwenza umkhwa wokusebenzisa ngasinye salezi zicwangciso kwiimvavanyo ezikhethiweyo zokuzikhethela kukukwenza ube ngumculi ovavanyo olungcono .
Funda umbuzo ubuncinane amaxesha amabini ngaphambi kokuba ukhange impendulo. Emva koko funda iimpendulo zempendulo ubuncinane amaxesha amabini. Ekugqibeleni, funda kwakhona umbuzo omnye ixesha.
Njalo uvale iimpendulo ezinokwenzeka ngephepha okanye iphepha ngesandla xa ufunda isitshixo okanye umbuzo wombuzo. Emva koko, vela impendulo entloko yakho ngaphambi kokujonga iimpendulo ezinokwenzeka, ngale ndlela indlela okukhethwa ngayo ekuhlolweni ayiyi kukugxotha okanye ikukhohlise.
Ukuphelisa iimpendulo owaziyo akulungile. Yonke impendulo onokuyichitha iyakwandisa amathuba akho okufumana umbuzo ochanekileyo.
Yehlisa isantya! Funda zonke ukhetho ngaphambi kokukhetha impendulo yakho. Ungacingi ukuba impendulo yokuqala ilungile. Ukugqiba ukufunda zonke ezinye iinqununu, kuba ngelixa i-yokuqala ingafanelekile, umva wokugqibela unokuba yimpendulo engcono, echanekileyo.
Ukuba akukho sihlwayo sokuqagela, soloko uthabatha uqikelelo oluthile kwaye ukhethe impendulo. Ungalokothi ushiye impendulo engekho.
Musa ukuguqula impendulo yakho; Ngokuqhelekileyo ukhetho lwakho lokuqala luchanekileyo ngaphandle kokuba ungayiphunduli umbuzo.
Kukho konke oku "ngasentla" kwaye "Akukho nto ingentla" ukhetho, ukuba unokwenyaniso enye yeenkcazo zinyani ukuba awuyi kukhetha "Akukho nto ingentla" okanye enye yeengxelo ayiyonto ayikhethi "Zonke ezi ngasentla ".
Kulo mbuzo kunye nokukhetha konke oku "ngasentla", ukuba ubona ukuba ubuncinane amabini anengxelo, "Zonke ezi ngasentla" ziya kuba yindlela efanelekileyo yokuphendula.
Ithoni inokubaluleka. Ukhetho olufanelekileyo lweempendulo luyakwazi ukuchaneka ngaphezu kokukhethwa kweempendulo ezimbi.
I-Wordiness ibonakaliso esihle. Ngokuqhelekileyo, impendulo echanekileyo yiyo ukhetho kunye nolwazi oluninzi.
Ukuba konke okuhlulekayo, khetha impendulo (b) okanye (c). Abafundisi abaninzi banokuva ukuba impendulo echanekileyo "ifihliwe" ngakumbi xa ijikelezwe ngabaphazamisi. Impendulo (a) ngokuqhelekileyo inokuba yinto encinci ukuba yinto echanekileyo.
Hlala ngaphakathi kwemigca. Qinisekisa ukuba uzalise iibhola ngokufanelekileyo nge- # 2 IPENCIL . Qinisekisa ukuba akukho mpawu ephosakeleyo.
Thatha ixesha lokujonga umsebenzi wakho ngaphambi kokuba unike iphepha lokuphendula. Kuvavanyo olufike ngexesha, sebenzisa yonke yesibini yexesha kufuneka uhambe ngaphezu kweempendulo zakho zokuphendula. Kuvavanyo olungaqinisekanga, jonga yonke into rhoqo.
Isingeniso soQoqosho kwiNkqubo yeJapan yeKireiretsu
AmaSikh Baby Names ukusuka kuM